Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Leighton Baines Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee dhabarka bidix ee lagu kalsoonaan karo kuwaas oo si fiican loogu yaqaan magaca; "'Duke The". Our Leighton Baines Childhood Story Sheeko iyo Xog-u-dhejin Jeclaado xaqiiqda waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo munaasabado la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan ka ah, nolosha qoyska iyo qaar badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda aan yarayn ee ku saabsan isaga.
Haa waa asaga ugu caansan ee loo yaqaan khibradiisa iyo ciqaabtiisa. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Leighton Baines Bio taas oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Leighton Baines Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan -Nolosha Hore
Leighton John Baines wuxuu ku dhashay 11th Diisembar 1984 ee Kirkby, Boqortooyada Ingiriiska Mr Mr iyo Mr Baines. Wuxuu ku dhashay Sagittarius.
Waxaa kor loogu qaadey Kirkby, Merseyside, Baines wax ku baratay St Joseph Shaqaalaha Dugsiga Hoose ee Catholic. Dugsiga hoose ee Liverpool wuxuu siiyey isaga fursada si aad ah u cayaaraan kubada tartanka xilliga cayaaraha. Kadib markii uu arkay arimo hor leh oo mustaqbalkiisa ah, waalidkiis ayaa go'aansaday in ay wiilkooda ku biiraan axada kubadda cagta kuwaas oo dhaqdhaqaaqiisa asbuucan aysan wax lug ku lahayn daraasaadka Leighton Baines.
Fadlan ogow: Kulanka axada ee horyaalka waa mid ka mid ah boqortooyada Ingiriiska si uu u sharaxo horyaalada kubada cagta ee axada oo ciyaaraya axada, sida laga soo xigtay sabtiga caadiga ah.
Da 'yar oo 10 ah inkastoo uu ku biiray kubada cagta sida ilmo rajo leh, hal arrin ayaa ku hadhay. Leighton Baines wuxuu ahaa ilmo xishood ah oo ka dhexjiray. In uu xishoodo wuxuu sameeyey cawaaqib aad u xun taasoo keentay inuusan lahayn caruur kale oo saaxiibo ah. Waad ku mahadsan tahay, waalidiintiisa iyo macalimiinta iskuulka ayaa ka caawiyay inuu ka adkaado xishoodkiisa. Tani waxay udhacday kubada cagta si ay u noqoto ciyaaryahan.
Leighton Baines Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan -Kusoo caan bax
Leighton Baines ayaa doorbiday inuu Everton ka ciyaaro tan iyo markii Liverpool ay ka walwalsan tahay xiisaha uu u qabo Everton. Sida uu mar u sheegay The Guardian;
Anigu waxaan ahaa dhalinyaro kaliya. Waan ka lumay xiisaha Liverpool, lakiin weli waan jeclahay daawashada kubada cagta. Waxaan ku sugnaa finalka FA Cup final 1995 markii Everton ay garaacday Manchester United 9-1. Tani waxay ahayd markii aan bilaabay inaan daawado Everton si sax ah.
Hooyaday ma oggolaan lahayd inaan tago aniga oo aan tago Goodison Park. Waxay ku adkeyneysaa ina-adeerkaygu seddex sano oo iga weyn aniga oo hagaya. Waxaan ka heleynaa baska, 50P oo ka socda Kirkby, ka dibna dibadda u seexi ilaa aan ka dhuuman karno. Waxaan sugeynay ilaa inta ay furayaan albaabbada ka dib daqiiqadaha 75 ee ciyaarta si ay u tagaan goor hore.
Waxaa jiray wakiillada albaabbada iyo haddii ay ku jireen niyad fiican ay weyb gali lahaayeen oo na soo gali doonaan. Hal nin, gaar ahaan, ayaa loo isticmaali jiray inuu nala eego. Laakiin mararka qaarkood, haddii aan nasiib laheyn, waxaa jiri lahaa shaqo aan ku habooneyn albaabka oo aynaan arki doonin wax. "
Dhallinyaro badan oo waaweyn, Baines si joogta ah ayuu hoos u dhigay xishoodkiisa ka dib markii uu la kulmay aduunka intiisa badan iyo fara-gelinta waalidiinta iyo macalimiinta sida hore loo sheegay. Wuxuu sii waday inuu sii ciyaaro axada kooxda kooxo la yiraahdo Key Ways oo ay weheliyaan xirfadlayaasha mustaqbalka Ryan Taylor (oo ku dhamaatay Newcastle) iyo David Nugent (Portsmouth iyo Leicester, iyo kuwo kale).
Waxa ay ku xiran tahay in Leighton Baines uu ka soo qalin jabiyay Axadii, waxaana uu ugu yeeray Everton. Kadib markii uu ka qayb galay tijaabooyin, wuxuu qayb ahaan aqbalay akadeemiyadda. Baaritaan kale oo lagu sameeynayo kooxda, Baines ayaa laga diiday akadeemiyadda. Maxkamad kale oo ka socota Wigan ayaa si guul leh u gudubtay Waxa uu ku sugnaa Wigan ilaa 2002 markii uu ku biiray kooxdooda. Baines ayaa ciyaaray khadka dhexe iyo weerarka; waxa uu ahaa kaliya markii uu bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee Wigan isagoo bilaabay inuu ka ciyaaro booska bidix.
Miraculously, Liverpool ayaa dooratay inay u baxdo daafaca bidix iyagoo doonaya inay xiiso u qabaan. Markaan maqlo, Baines waxa uu dareemay sidii uu ahaa dhamaadka adduunka oo uu cabsi galiyay Everton sidoo kale way soo wacday. Waxa uu aqbalay Everton ka dib markii uu ku faraxsan yahay raaligelin iyo raali gelin iyo sidoo kale inuu dalbado inuu kudhowo waalidkiis. Inta kale, sida ay u badan yihiin, hadda waa taariikh.
Leighton Baines Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan -Nolosha Xiriirka
Gadaal kasta oo weyn, waxaa jira haweeney weyn, ama sida hadalku u socdo. Dhinaca kale ciyaaryahan kasta oo England ah, waxaa jira naag ama gabar saaxiibtinimo leh.
sida Toby Alderweireld, Baines ayaa bilaabay inuu xiriirkiisa ku yeesho garoonka oo uu la yeesho caruurnimadiisa carruurnimada loo yaqaan Rachel. Xiriirintooda waxay ka qaadeen inay ka helaan duruufaha ugu fiican ee jacaylka dhabta ah. Baines mar ayaa soo xasuustay mid ka mid ah xusuusta carruurnimada ugu horreysa ee u muujiyay jacaylka Rachel iyo in ay rumaysan yihiin in ay guursan karaan maalmo ay is qabteen.
2009, Leighton Baines ayaa guursatay Rachel oo ah xaflad qarsoodi ah. Lammaanayaashu waxay leeyihiin carruurta 3 oo ay la socdaan kii ugu horreeyey ee ku dhashay markii Leighton uu ahaa kaliya 18 sano jir ah. Hoos waxaa ka muuqda sawirka shimbir Baines 'oo ah kan labaad ee bidixda.
Rachael waa mid ka mid ah xaasaska kale ee Everton iyo saaxiibtiis kuwaas oo ballan qaaday ninkeeda dhaqaale maaliyadeed si ay gacan uga geysato lacagta loogu talagalay Ololaha Kansarka Naasaha.
Leighton Baines Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan -Naftaada Shaqsiga
Leighton waa mid xiiso badan oo firfircoon. Muujintiisa furan iyo falsafad ahaanba waxay dhiirrigelisaa inuu marwalba raadiyo oo ka warramo macnaha dhabta ah ee nolosha. Isagu waa mid furfuran, rajo iyo dhiirranaan, wuxuuna jecel yahay isbedel. Baines wuxuu awood u leeyahay inuu beddelo fekerkiisa ficil wax ku ool ah wuxuuna sameyn doonaa wax kasta si uu u gaaro himiladiisa.
Leighton Baines Xoogagga: Leighton Baines waa deeqsinimo, midnimo, waana dareen weyn oo sharaf leh.
Leighton Baines Tabar-darrada: Waxkasta ha sheegin sida ay u hooseyso.
Maxaa Leighton Baines jecel yahay: Xorriyadda, safarka, falsafada iyo in dibadda la joogo saaxiibkiisa dhow, Miles Kane.
Maxay Leighton Baines Jeceshahay: Dadka dabiiciga ah, oo ah xannibaadyo, fikrado ka baxsan dusha, faahfaahin.
Leighton Baines Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xaddidan -Nolosha Qoyska
Leighton wuxuu ka yimaadaa asal hoose dhexe. Wakhti yar, waalidkiis ma ahan kuwa hodanka ah ee ku filan inay bixiyaan tikidh buuxa oo Everton ah isaga oo caruur ah. Waxay awoodi kari waayeen inay iibsadaan xataa hal tikidh Everton ah oo ubadkooda Leighton ah. Labada aabbe iyo hooyo mar mar ayay u ogolaadeen wiilkoodii oo uu la socdo walaalkiis inuu sugi lahaa banaanka hortiisa Goodison Park si uu u furo albaabbada. Toban daqiiqo oo qiimo leh oo bilaash ah!
Waa arrin ku haboon in la ogaado in qof walba oo reerkiisa ah oo ay ku jiraan qaraabada uu yahay Liverpool ama taageeraha Everton. Baines ayaa ku sugnaa Everton muddo dheer sidaas darteed waalidkiisa jecel oo jecel inay joogaan wiilkooda.
Baines ayaa mar hore ku sharraxay sida waalidkiis uu u soo istaagay ka dib markii uu ka careysnaa diidmada Everton si ay ugu dhigto akadeemigeeda. In uu erayada
"Waxaan u imid maalintaas, waxaan u maleynayay in ay ahayd. Si loo sheego inaanan fiicnayn waxay ahayd dharbaaxo weyn. Laga soo bilaabo halkaas waxaan u tegey Wolves oo aan ciyaaray tijaabo.
Sannado yar ka dib, Everton ayaa ku faraxsanaa isaga oo doonayay inuu soo laabto. Juqraafi ahaan waxay u sahlanayd waalidkay, sidaas ayaana ah meeshii aan tagay iyo meesha aan ku sugayay ".
Ayuu yiri Baines.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta our Leighton Baines Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Callum Hudson-Odoi Sheekada Carruurnimada Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha